Nayakhabar.com: के तपाइँ आफ्नो धुमपान लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने एकपटक पढ्ने कि ?
काठमाडौं । नेपालमा धुम्रपान र सुर्ती सेवनबाट बर्सेनि २६ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। धुम्रपानले ज्यान लिन्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी त्यहि सेवन गरि राखेका हुन्छौ । लत लागिसकेको धुम्रपान त्याग्ने कुरा मानिस कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । तर त्यसो होइन, धुम्रपान सजिलै त्याग्न सकिन्छ । सबै भन्दा पहिला म धुम्रपान त्याग्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ ।
धुम्रपानको तल तल लागेमा ल्वाङ र सुकमेल, चुइङगम चपाउने गर्नुपर्छ । धुम्रपान छाड्न चिया, कफि पहिला छाड्नुपर्छ ।